MUUQAAL: Foosiya Yuusuf oo si kulul uga Hadashay Hadalkii Sheekh Shariif | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Nov 14, 2019 - 13 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xildhibaan Foosiya Yuusuf Xaaji Aadam oo Xilal kala duwan kasoo qabatay dalka, ayaa wax laga Xumaado ku tilmaantay Hadalkii dhowaan kasoo yeedhay Madaxwaynihii Hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sh. Axmed.
Xildhibaan Foosiya ayaa tilmaantay in Bulshada Soomaaliyeed ay ka Naxeen Hadalkaasi, Islamarkaana dadka Soomaaliyeed aysan hada diyaar u ahayn dagaal iyo dhibaato hor leh, Balse ay usoo jeesteen inay dhistaan dalkooda.
Arintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo Sheikh shariif uu dhowaan sheegay, in magaalada Muqdisho ay ka saari doonaan Dawladda Soomaaliya, sidii horay looga saaray Mooryaantii, Alshabaab iyo Itoobiyaankii. Sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale Foosiya ayaa waxay ka hadashay Arimo la Xidhiidha Doorashada la Filayo inay Sanadka 2021-ka ka Qabsoonto dalka.
Shiikh Shariif waa ninkii Xamar isugu keenay
dhamaan Beel-daaqeyaasha Soomaaliyeed ee dhahay heshiiya oo walaa looba.
Shiikh Shariif waa ninkii Xamar ka taagey Parliament shacabka Soomaaliyeed kadib midkii 1967 ee lagu doortey C/rashiid Sharma’arke
Shiikh Shariif waa ninkii Doorasho Xamar ku qabtey kadib doorashadii qabtey ADAAN CADDE sanadkii 1967.
Shiikhu waa ninkii Kursiga looga guuleystey Xamar ku wareejiyey Kadib AADAN CADDE.
(Wixii kale dalka dibaddiisa ayey kadhicijireen)
Shiikh Shariif waa Madaxweynahii hore ee KAMARQAATI AHAA xil kala wareegii, Madaxweynahii Xilka kaga guuleystey Xassan Shiikh iyo Madaxweynaha hadda xilka hayo.
– Taas waa taariikh Gaal iyo Muslim wada ogyahey.
Hadalkii shiikhu wuxuu ahaa
Waxkasto oo dhaawacahayo ama burburinhayo Dhibkii laga soo marey PARLIAMENT, MAAMULKA IYO MAXKAMADDA hadda XAMAR LOOGU YIMID KAMA YEELAYNO SHAQSI KASTO OO ISKU DAYO INUU BURBURIYO.
– Burburis waxaa ka mid ah,
in hantida shacabka loo adeegsado si qaldan
– In dhaq dhaqaaqa shacabka iyo madaxdii hore laga dido.
– Duulimaadka shacabka iyo madaxdii hore Qatar lagu geliyo naftooda.
– In dhaqaalihii loo aruuriyey in wax loogu qabto bulshada loo adeegsado AMAAN shaqsi IYO DACAAYAD shaqsi.
– In tuhun la geliyo geedi socodkii nabadda, iyo DOORASHADII SOO SOCOTAY.
– In aan ladaneyn, wada hadaladii Sidii loo soo celin lahaa QARAN BUUXO OO KOOFUR IYO WAQOOYI KA KOOBAN.
– WAXAAS OO DHAN WAA IN LOOGA HORTAGO,
DAGAAL WACYI GALIN IYO IFTIIMIN AH
Nimankaasi Hawiye horta yaa ka dulqaad badan? Laajiyiin ayaa maalin walba hadalkoodu ka daba qaadanaysa.
Barwaaqo somalida laajiyiin isuma aha laaji waxaa ladhihi kara hadiiba somali laaji kayhy xamar ninka aan shicibka unaxeyn ee raba qaxa dadka inuu saldanad kugaaro
Mass:FOWSIYA QAAR BADAN OO DAWLADA KUJIRA BAY KA CAQLI & ARAGTI DHEER TAHAY!!!.
Sheekh Shariif habartan waa inuu soo mastaafuriyaa.kkk
Hhhh. Foosiya yuusuf xaji aadan cilmi qabile qaarbiciidle hhhh. Waa abtirsiinteeda midkale awalba hoosta ka hawiye ayay ahayd
Rooble Nacas, Maxaa kaa galay Abtirsigeeda HADDAADAN Duqaan Daydaygaa Laalays ku dhihi karin; “War gabadha ha aflagaadayn” Mise riyadi madax bannaani UU godka ku riday Suldaan Abuubakar Cilmi baa ku tiri Gabdhaha Gobta H/Yoonis ha aflagaadeeyo DUQAAN jiran?. WBT
Rooble mxaa kudaaray
Fooziya waxay u taramaysaa Madaxwaynaha somaliya.
Iyada iyo Formaajo ayuu dhexmarayaa tartan cuslus.
Fawsiya Xaaji Aaden, waa wasiirka Arrimaha Gudaha ayyadaa Laba midigle ahe. WBT
Fawsuya wali way ishsystaa mashaaalaah waa gabar yar waan kahelay. Sidee kula Xidhiidh aa. Wali waa dhsliyaro waxaan kehelaa labiska. Wow woow.
Wadanibo C z zzMzmzz zmzmzm says:
Fawsiya inay ujawabto mahayn waayo wuxuu kuhakadlay caruurta hawiye ayaa yaabtay ninkan waa kii khayanay 10 kun Maxakim ah wax ladilo wax la qabto laga dhigay suut kaa u been shegay. Wuxuu yiri farmaajo boor so ma dhan watay isaga khamiis buu watay markii u horaysay. Macnaha qabiil ahaan uhadlay. Kaaga darane wuxuu bartay xooga inglish ah .kaaga darane madaweyne rabaa inuu noqdo. Wuxuu kaloo yiri farmaajo oyo axmad madoobe waa darod. Way iisimsn yihiin macnaha aniga muduloid ahay hawiye. Dadka noocaas ah Fawsiya fadlan ha ujawabin waa layahay inaad somali jeceshahay hooyo somaliyeed tahay. Sheekh sharif fawsuya ka muqal wanagsan labiska oyo hadalka.